/ Products / vamwe / Fulvestrant (129453-61-8)
SKU: 129453-61-8. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhutano hweFulvestrant (CAS 129453-61-8), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutsika.
Fulvestrant powder iyo yakagadzirwa nesrogen receptor inopikisana. Kusiyana ne tamoxifen (iyo ine zvikamu zvishoma zvegonist zvinokonzera) uye aromatase inhibitors (iyo inoderedza isrogen inowanika kumaromine masero), fulvestrant anosunga makwikwi kune esrogen zvinogadziriswa mumasero epabonde, zvichiita kuti isrogen inogadziriswa uye inopera isrogen kusunga.
Fulvestrant (129453-61-8) kushandiswa mu steroid cycle
Fulvestrant (CAS 129453-61-8), Zita rekushandisa ndiro Faslodex.
Fulvestrant inouya semugadziri (mvura) kuti inyore zvishoma nezvishoma pamusoro pe1 kusvika ku2 maminitsi mumusungo mumashure. Fulvestrant (129453-61-8) inotungamirirwa nachiremba kana mukoti muhofisi yemamerican. Inowanzopiwa kamwe kamwe mavhiki e2 yekutanga 3 doses (mazuva 1, 15, uye 29) uye kamwe kamwe mwedzi pashure. Iwe uchagamuchira mukana wako wemishonga sezvikamu zviviri zvakasiyana-siyana (imwe mune imwe nhomwe).
Izvi zvinotevera kukuvadza zvinokurukurwa zvakajeka mune zvimwe zvikamu zvekuraira: Dambudziko rekuchenesa, Kuwedzera kwekuratidzwa kune varwere vane Hematic Impairment, injection Site Reaction, Embryo-Fetal Toxicity.
Mahomoni ndiwo makemikari ayo anokonzerwa nemaronda mumuviri, anosvibisa ropa uye anokonzera kuitika mune mamwe maviri. Semuenzaniso, hormone testosterone yakaitwa mumakumbo uye inokonzerwa nehunhu hwemurume zvakadai sekudzika izwi uye kuwedzera mvere dzemaviri. Kushandiswa kweHormone therapy kuporesa kenza kunobva pane zvakatarisa kuti zvinogamuchirwa zvehomoni zvakasiyana-siyana zvinoda kuti sero rikura riri pamusoro pemamwe tumarara masero. Hormone therapies inoshanda nekugadzirisa kubudiswa kwemamwe hormone, kudzivirira hormone receptors, kana kushandisa makemikari akafanana nemasikironi anoshandiswa, asingagoni kushandiswa nechiremera chemaitiro. Mhando dzakasiyana dzemishonga yehomoni inorongwa nemabasa avo uye / kana rudzi rwehomoni inoshandiswa.
Mishonga yakawanda yemazamu ine esrogen receptors, uye kukura kwezviremera izvi zvinogona kukurudzirwa nesrogen. Fulvestrant (129453-61-8) inonzi estrogen receptor downregulator, izvi zvinoreva kuti inosungirirwa kunzvimbo yekugamuchira yesrogen mukukwikwidza ne estrogen mumuviri. Kana ikasungirirwa kunzvimbo iyo inokonzera kuti mapapiro adzoke, nekudaro kudzivirira kushandiswa kwemafoni emagetsi kune estrogen.
Nzira yekutenga Fulvestrant kubva kuAASraw